Brindle Pitbull (Tilmaamaha Milkiilayaasha Cusub ee Eygan Tigree-ga ah) - Taranka
Brindle Pitbull (Tilmaamaha Milkiilayaasha Cusub ee Eygan Tigree-ga ah)
Ma waxaad raadineysaa a Pitbull oo leh pizazz yar ? Ka dib ha u sii eegin Brindle Pitbull.
Jacaylka iyo daacadnimada, eeyahaani waxay u egyihiin milkiilayaashooda sida eey kale oo kale. Ha u oggolaan in muruqoodu dhismo nacasnimo, eeyadan ayaa u jilicsan sida ay u yimaadeen.
Dadka badankood waxay u maleynayaan eeygan inuu yahay nooc gaar ah, waa midabyo kale oo beddel ah (yacni garaacis) eyga (tusaale, diillimo madow iyo bunni).
Pitbull waa wehel caqli badan, saaxiibtinimo leh, oo daacad u ah, oo si fiican ugu habboon nolosha xayawaanka guriga jooga.
Waxay yihiin eey aad u caqli badan oo daacad ah oo wax weyn ku kordhiya qoys kasta. Laakiin maxaa laga ogaan karaa eeygan shabeelka laga xayuubiyey? Akhriso si aad u ogaato!
Astaanta Brindle Pitbull
Cabir 18-21 ″ oo dherer ah (lab ah) iyo 17-20 ″ oo dherer ah (dhedig)
Miisaanka 30-60 lb (lab) iyo 30-50 lb (dumar)
Nolosha qofka 10 - 15 sano
Nooca Taranka Kooxda Terrier
Ku Haboon Qoysas
Kala duwanaanta Midabka Madow oo leh xariijimo bunni ah (Brindle)
Dabeecad Jacayl, Daacad, Adag Rabitaan, Saaxiibtinimo, Geesi
Magacyo Kale Pittie, Godka Brindle
Waa maxay Brindle Pitbull?
Brindle Pitbull Taariikhda iyo Asalka
Brindle Pitbull Ey
Brindle Pitbull Dabeecaddiisa
Sida loo daryeelo godka Brindle
Quudinta Dulinka - Shuruudaha Cunnada
Tababbarka Brindle Pitbull
Muuqaalka Brindle Pitbull
Shuruudaha Guur Gaarka ah
Soo Koobid Nooc
Brindle Pitbull wuxuu noqon karaa Staffordshire Bull Terrier, American Pitbull Terrier ama noocyo kale oo dibi ah oo ku yaal Brindle.
Pindbull Brindle waa eey dahsoon oo ah adduunka aan eeyaha laga aqoon .
Ereyga waxaa loo adeegsadaa in lagu qeexo eey kasta oo bulldog ah ama asal terrier ah , laakiin, guud ahaan waxaa ka mid ah:
Staffordshire Dibida Terriers
Noocyo kale oo Bull ah
Tan awgeed, ma aqoonsana Naadiga Kennelka Mareykanka (AKC), laakiin, inbadan oo ka mid ah shakhsiyaadkooda shakhsiga ah ayaa ah.
Midabkani wuxuu midabkiisu soo bilaabmay 1800, kii, halkaas oo ay ugu muuqdeen iskutallaab udhaxeysa Old English Bulldog iyo Terrier - iyagoo isku daraya naxariis darada iyo daacadnimada Bulldog iyo khiyaanada iyo xariifnimada Terrier-ka.
Waqti dheeri ah, eeygu wuxuu ku sii jeeday Ameerika, in kastoo waxaa loo soo saaray dagaal , qofna ma diidi karo sida jacaylka Pitbulls u ahaayeen.
Waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso sida eey loo adeegsaday dagaalka eeyga, loogu yaqaan naxariistiisa dadka. Jawaabtu waa - waxay ku jirtaa tarankooda. Eeyoda qaniinay kuwa wax haysa ayaan wax faa'iido ah lahayn. Sidaa darteed, eeyaha dadka qaniiniyo lagama soo saarin natiijadaasna, eeyadan ayaa dadka jecel.
Midabkan ayaa markii ugu horreysay la arkay horraantii qarnigii 19aad. Waxaa la rumeysan yahay inay markii ugu horreysay ka soo farcameen doofaarro iyo eey bunni ah - natiijada, waa shabeel u eg xariiq.
Taariikhdooda oo ah eey dagaallamaya awgood, waxaa muhiim ah in aad looga taxaddaraa marka aad soo iibsaneyso eey.
Nasiib darrose, eeyahaas wali waxaa loo isticmaalaa dagaalka eeyga sharci darada ah , sidaa darteed waxaa muhiim ah in la hubiyo inaadan ka iibsan eey eyda ka soo baxaan.
Naadiga Kennelka Mareykanka (AKC) wuu hayaa liiska rasmiga ah ee ku abtirsada , tani waa meel fiican oo laga bilaabo.
A Brindle Pitbull Puppy badanaa waxay ku kacaysaa $ 500 iyo $ 700 USD oo leh celcelis qashin qashin ah oo u dhexeeya 5 iyo 8 eeyo.
In kasta oo qurux badan yahay, xarig-jarkaani maahan mid naadir ah, sidaa darteed, haddii abuure ay isku dayaan inay lacag badan ka qaadaan qaabkan 'u gaarka ah', waxaa ugu wanaagsan in laga fogaado oo la isku dayo abuure ka daryeel badan eeyaha yar yar ee lacagta ah.
Eeyahaani waxay u muuqan karaan kuwo adag, laakiin, xaqiiqadu waxay tahay waa kuwo daacad ah oo jecel.
Iyada oo sax ah qadarka bulshada , eeyahaani waxay u sameeyaan xayawaan la yaab leh qoys kasta. Iyagu waa kuwo caqli badan oo wax garanaya, taas oo ka dhigaysa mid aad u dhaqso badan markay timaado tababarka.
Brindle Pitbulls waxaa loo yaqaanaa xiisaha cajiibka ah ee nolosha, sidaa darteed wax badan, xitaa waxaa lagu sheegay heerkooda nooc. Wax walba waa u quudhin eeyahaas, xitaa shaqooyinka aan caadiga ahayn sida helitaanka boostada ama safarka dukaan kafeega ah ayaa iyaga u keeni doona farxad.
Midabaynta Brindle eeygan kuma kala duwana arrintan, waxay aad ugu egyihiin shakhsiyan ilma adeerradooda midabka leh .
Eeyahaani waa kuwo aad u jecel oo sidaas darteedna ay aad ugu fiican yihiin carruurta, siinta waxtarro badan qoyskaaga . Si kastaba ha noqotee, iyagu waa arday badan oo awood leh sidaa darteedna dhammaan xiriirka waa in lala socdaa.
Si kastaba ha noqotee, sida ugu wanaagsan ee ay ula joogaan carruurta, uma dulqaad badna eeyaha kale.
In kasta oo ay xamili karaan is dhexgalka eyda hal-ilaa-hal, Brindle Pitbull ayaa u muuqan doonta inay si xun u falceliso markii loo soo bandhigo baakado eeyo ah. Marka tan la helo, waa in si wanaagsan loola dhaqmaa marka eey ey la leeyihiin kooxo eeyo ah. Intaa waxaa dheer, dhammaan la dhaqanka eyda kale waa in la kormeero oo luuqadooda jidhku si dhaw ula socday .
Pitbulls looma yaqaan inay yihiin ganacsato xad dhaaf ah. Haddii ay dareemaan in iyaga ama qoyskoodaba loo hanjabayo waxay noqon doonaan waxqabad ka badan sawaxanka.
In kasta oo Brindle Pitbulls lagu yaqaan inay yihiin eeyo jecel, dabeecadooda buunsigu waxay ka dhigi kartaa inay shilalka u nugul yihiin, gaar ahaan carruurta yaryar. Sidaas darteed, laguuguma talin doono guryaha carruurta yaryar.
Kuwani ciyaal muruqyo ah ma garanayaan xooggooda taasna waxay keenaysaa inaanu ku habboonayn dadka waayeelka ah, gaar ahaan ragga da'da yar.
Brindle Pitbulls waxay leeyihiin calool adag, sidaa darteed sifiican ayey ugu fiican yihiin noocyada kala duwan ee cuntada.
Haddii aad doorato inaad quudiso kibble qallalan, quud inta u dhexeysa 2 iyo 3 koob maalin kasta, iyadoo kuxiran cabirka iyo culeyska eygaaga gaarka ah.
Eeyadan sidoo kale waxay ku fiican yihiin cunnooyinka qoyan iyo kuwa cayriin. Tani waa in la quudiyo laba jeer maalintii si ay ugu dhigmaan cuntadaada oo eygaaga u siiso dareen caadi ah iyo cunno yar yar.
Markaad dooranayso quudinta, waxaa muhiim ah in la doorto mid aan ku jirin galley, soy ama qamadi, maadaama eeyaha qaarkood ay xasaasiyad leeyihiin, taasina waxay sababi kartaa buurbuur ama arrimo kale oo caafimaad.
Waxa kale oo jira suurtagal inay xasaasiyad ku leeyihiin hilibka ama caanaha. Natiijo ahaan, marka la soo bandhigayo quudin cusub, waa in loo sameeyaa si tartiib tartiib ah iyo qaddar yar, si loola socdo falcelintooda.
Pindbull Brindle waa inuu cunaa ugu yaraan 18-22% protein sida ay kugula taliyeen Isutagga Saraakiisha Xakamaynta Quudinta Mareykanka . Tani waxay lagama maarmaan u tahay cunnadooda si loo ilaaliyo murqo-dhiskooda.
Haddii aad ku tababbaraneyso cuntada, hubi inaad tan ku saleyso qaadashada kaloriinta maalinlaha ah ee eygaaga.
Daqiiqado 60 daqiiqo
Pitbulls waxaa loo soo saaray inay firfircoon yihiin Brindle Pitbull-na kama duwana. Eeyadan ayaa had iyo jeer u taagan hal-abuur waxayna ku jiraan kuwa ugu farxadda badan markay bannaanka joogaan.
Eeyahaani waxay jecel yihiin socodka dabeecadda tanina waxay noqon kartaa wax ay tahay inaad ka fiirsato inaad ku samayso ilmahaaga - kaliya iska hubi inaadan dhaafin inta lagu jiro biseylka.
Waxay noqon karaan kuwo buuq badan marka aan jimicsi la sameynin socod socod maalinle ah ayaa kaa caawin doona inaad bixiso kicinta jirka iyo maskaxda ee eeygan u baahan yahay.
Brindle Pitbulls waxay la mid yihiin Bogagga midabbada caadiga ah leh, marka waxaa ugu wanaagsan in laga fogaado aagagga ay ku badan yihiin baakado kale oo ey ah maadaama ay u arki karaan inay khatar yihiin.
Haddii aad rabto inaad ku dhex lugayso aag mashquul ah eeygan waxaa ugu fiican inaad eeygaaga ku hayso xadhig.
Ka dib markaad ka soo ururiso eygaaga breed, ama xarunta badbaadinta , waxaa muhiim ah in loo diyaar garoobo in si dhakhso leh loo bilaabo hawsha tababarka.
Pitbulls uma badna inay wax cunaan eeyaha kale, waxayna leeyihiin a dabeecad lagu kalsoonaan karo oo la yaqaan , si kastaba ha noqotee, daamankooda adag awgood, waxay aad ugu dhowdahay inay ka tagaan dhaawac waara. Sababtaas awgeed, Pitbull si fiican u tababaran oo bulsheed waa muhiim.
Haddii aad qorsheyneyso inaad Brindle Pitbull agjoogtid carruurta, muhiim maahan oo keliya inaad baraan eygaaga sida loola dhaqmo carruurta, laakiin, in carruurta la baro sida loo dhaqmo eeyaha. Ku billow sameynta xuduudaha goor hore oo bar carruurtaada sida saxda ah eeyga u salaaxaan iyo sidoo kale sida tartiib tartiib ah loogu ciyaaro.
Inkasta oo eeyahaani u muuqdaan kuwo adag sababo la xiriira muruqooda, haddana runti waa jilicsan yihiin. Tani waxay ka dhigan tahay in nooc kasta oo tabobar maamul ah, ama sixid jireed ah, uusan shaqeyn doonin.
Kaliya maahan inay si aan caadi ahayn daacad u yihiin, laakiin, waxay sidoo kale ku adkeysan karaan tababarka. Sidaa darteed, qaabkan tababbarku wuxuu dhalin doonaa eey aaminin ah oo ku xirmay dagaal dardaaran ah oo aadan kula guuleysan karin.
Waa inaad isku daydaa inaad adeegsato xoojin wax ku ool ah iyo tababar guji si aad eygaaga ula macaamisho markaad tababbarto oo aad caqabad ku noqoto caqligiisa ama maskaxdeeda. Waqti ka dib, eeyahaani waxay noqon karaan eeyo addeecid ah, sida Moxie the Brindle Pit kaasoo ku guuleystey Abaalmarinta adeecida AKC sanadkii 2012 .
Sida eyda ugu waaweyn , Brindle Pitbull wuxuu u nugul yahay dysplasia sinta. Eeyaha qaba xaaladan waxay u muuqdaan inay la kulmaan xanuun iyo leeyihiin socodka aan sinnayn . Si kastaba ha noqotee, jimicsi joogto ah iyo miisaanka xakamaynta, tani waa inay ka yaraato arrinta.
Sida Pitties badankood, waxay sidoo kale u nugul yihiin Parvovirus (yacni fayras la is qaadsiiyo) markay da 'yar yihiin - markaa in la tallaalo sida ugu dhaqsaha badan waa macquul. Tani waxay si gaar ah ugu badan tahay Pitbulls maadaama lagu yaqaan inay leeyihiin nidaam difaac daciif ah marka loo eego eeyaha kale.
Pitbulls sidoo kale waxay u nugul yihiin Cerebellar Abiotrophy, xaalad neerfaha ah oo saameyn ku leh isku-duwidda. Calaamadaha tan waxaa ka mid ah socodka oo aan degganeyn iyo xakameynta murqaha oo liita. Waxaa sababa isbeddel hidde ah oo ku dhaca barkadda hidda-wadaha, tan si fudud ayaa looga baari karaa eeyo. Tani waxay si gaar ah muhiim u tahay haddii aad iibsanaysid abtirsiin, maxaa yeelay dadkani waxay u badan yihiin inay ka hiddo badan yihiin kuwa kale.
Inta badan Brindle Pitbulls waxay ku noolaan doonaan nolol farxad iyo caafimaad leh oo dheer, oo leh cunto wanaagsan iyo jimicsi fara badan, waa inay filayaan inay gaaraan ilaa 15 sano jir.
Eeyadan ayaa u muuqda oo u dhaqaaqa sida Pitbull kasta oo kale, waxa gaarka ah ee iyaga ku saabsan waa qaabka gogosha ee dhogorta. Iyagu ma aha nooc eey ka duwan.
In kasta oo hiddo-wadaha jaakad jilicsan loo yaqaan 'recessive', haddana maahan wax aan caadi ahayn in la arko eey leh diillimahan shabeellada u eg.
Termull Terrier-ka Mareykanka ee buuxiya heerarka abtirsiinta, wuxuu leeyahay madax ballaaran oo wareegsan, oo ballaadhan oo dhegaha u dhexeeya.
Waxay leeyihiin san yar oo dhexdhexaad ah, indho wareegsan sankooduna wuxuu noqon karaa buluug ama casaan. Pitbulls waxaa lagu aqoonsan karaa jirkooda muruqyada iyo dabo adag.
Dhogoroodu waa toosan tahay, way yar tahay waxaana lagu yaqaan qallafsanaan. Dharka ayaa sidoo kale ku yaal dhinaca gaaban.
Brindle Pitbulls waxay leeyihiin karbaash madow (tusaale ahaan madow) oo ku yaal asalka khafiifka ah (tusaale ahaan bunni), sidoo kale waxaa jira midab beddel ah oo halka ay iska soo horjeedaa run tahay (ie, nabarro fudud oo ku yaal asal madow).
Haddii aad awoodid, waa inaad cadayato Pitbull-kaaga maalin kasta.
Tani wax uma tari doonto oo keliya jaakadda eygaaga, laakiin sidoo kale waxay u dhaqmi doontaa sidii waqti aad adigu ugu xirmi lahayd godkaaga Brindle. U adeegso buraash caag ah dhaqdhaqaaqa wareega si aad ugu soo celiso dhalaalka jaakada eygaaga. Inta lagu jiro xilliga daadinta, iskuday inaad isticmaasho burush jilicsan si aad uga saarto timaha dabacsan jaakadda eygaaga.
Timahooda gaagaaban awgood, eeygan ayaa guursanaya si aad uga wanaagsan inta badan sidaas darteedna wuxuu u baahan doonaa maydhasho aad u yar.
Si kastaba ha noqotee, waxay u nugul yihiin xaaladaha maqaarka iyo xasaasiyadda sidaa darteed maydhashada waxay u baahan doonaan shaamboo gaar ah .
Nadaafadda ilkaha ayaa sidoo kale muhiim ah, oo ka dhigaysa cadayga ilkaha mid muhiim ah Caday sida had iyo jeer eeygaagu kuu oggolaan doono. Soo qaado daawada cadayga ee loo yaqaan 'doggie' oo aad xoqdo.
Ciddiyaha jarista ayaa sidoo kale muhiim ah laakiin waa inuu sameeyaa oo kaliya xirfadle, sida dhakhtar xoolaha ama xanaaneeye.
Daacadnimo iyo kalgacal, Brindle Pitbull ayaa kuu noqon doonta saaxiibkaaga ugu fiican wuxuuna kuu soo mari doonaa waqti iyo waqtiba.
Eeyadan ayaa wax weyn ku soo kordhiya qoys kasta oo qoys ah. Waxay jecel yihiin socod ama ku ordaan kaynta oo ay ku xigto sariir sariir. Looma yaqaan inay madax-bannaan yihiin, jecel yihiin dareenka qoyska, oo ay leeyihiin dabeecad deggan.
Haddii aad raadineyso ey weyn oo madax-bannaan, markaa waxaa laga yaabaa ina-adeerkood Isku-darka 'Pitbull Husky Mix' noqon lahaa more haboon
Pitbull-kaani sidoo kale wuxuu noqon karaa ciyaar kaamil ah haddii aad taageere u tahay xiisadaha u hoggaansamida hiwaayadda oo aad raadineyso tartan cusub oo aad ku qaadatid giraanta.
Haddii qalbigaagu yaalo Burburka Brindle, hubi inaad siiso jimicsi iyo kicin badan, iyo waxyaabo badan oo la sameeyo intaad guriga ka maqantahay.
Ma ka haysaa fikir gubanaya ama su’aal ah eeyahaas? Xor ayaad u tahay inaad faallo noogu reebto hoosta.
Isku Dhafka Shepherd Lab Sheybaar: Eyga Reerka Ugu Fiican Dunida?
meeqa ayaa qiimaheedu yahay pitbull sanka buluuga ah
maxaa loola jeedaa marka eygu qallalo
sida loo isticmaalo suunka
yorkie shih tzu isku dhafka macluumaadka
feeryahanka iyo eyga isku dhafka shaybaadhka